Hogaamiyaha Mucaaradka Bahrain oo Xabsi Daa’in Lagu Xakumay – AwKutub News
Hogaamiyaha Mucaaradka Bahrain oo Xabsi Daa’in Lagu Xakumay
By awkutubnews November 4, 2018 November 4, 2018
Leave a Comment on Hogaamiyaha Mucaaradka Bahrain oo Xabsi Daa’in Lagu Xakumay
Sheikh Ali Salman iyo laba sarkaal oo sare oo mucaarad ah oo dhamaantood ka tirsan dhaqdhaqaaqa laga mamnuucay dalka Bahrain ee Al-Wefaq ayaa maxkamadda danbiyada ee dalkaasi ay ku weysay danbi ah in ay u basaasayeen Qatar.
Sheekh Ali Salman
Hase yeeshee Sheekh Ali Salman oo ah higaamiyaha kooxdani, ayaa waxaa hadda loo xiray eedeymo kale. Labada kale ee la xakumay ayaa ka maqan dalka Bahrain waxaana xakunkooda uu dhacay iyaga oo aanan joogin maxkamadda.
Hey’adda Amnesty International ee u dooda xaquuqda aadanaha ayaa ku tilmaantay xakunkan xabsi daa’inka ah ee lagu riday saddexdani nin Caddaalad la marin habaabiyay.
Amnesty waxay sheegtay in Sheekh Ali Salman uu u xiranyahay kaliyah isaga oo si nabad ah u adeegsaday xorriyaddiisa hadalka.
Tags: Bahrain Carabta Mucaarad Mudaaharaad Wararka
Previous Entry Talyaaniga oo Soo Saaray Sharci Xaddidaya Muhaajiriinta
Next Entry Dawlad Deegaanka Soomaalida Oo Deeq Soo Gaarsiisay Gobolka Sool